ထောင့်အဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
ထောင့်အဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ထောင့်အဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
ကြေးဝါ Bibcocks ဥယျာဉ်ကိုအသာပုတ်ပါ
ကြေးဝါ Bibcocks ART.8122 ကြေးဝါ Bibcocks အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ??,3/ 4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: 1. Bibcock ဆက်သွယ်မှုကို hose ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. ရေ (NPT) ချည်အထီးဝင်ပေါက် ACC / GB / T က 12716 ။ 4. လူမီနီယံလက်ကိုင်အားဖွငျ့အလုပ်လုပ်။ 5. မဟုတ်သော ejectable ပင်စည်။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၂၀...
ကြေးဝါ Bibcocks ART.8125 ကြေးဝါ Bibcock အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: 1. Bibcock ဆက်သွယ်မှုကို hose ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. ရေ (NPT) ချည်အထီးဝင်ပေါက် ACC / GB / T က 12716 ။ 4. လူမီနီယံလက်ကိုင်အားဖွငျ့အလုပ်လုပ်။ 5. မဟုတ်သော ejectable ပင်စည်။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၂၀ ဒီဂရီအထိအပူချိန်...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ * 16 မီလီမီတာမှ နီကယ်နှင့်ပြင်ပဝက်အူ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ နိုးထအပူချိန်: -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်; -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
နီကယ် plated ထောင့်အဆို့ရှင်
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ နိုးထနေသောဖိအား - ၁၆ ဘားမှ ၂၅...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း - သွပ်သတ္တုစပ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကြေးဝါကိုယ်ထည် အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ, 3/4 လက်မ ပစ္စည်း: CW617N ကောင်းမွန်သော dring စံသည် ရေဆေးရန်သင့်တော်သည် အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်ဖိအား: 1000 Psi (7.0mpa) စီးရီး မျက်နှာပြင်ကုသမှုကို Chrome...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar သို့ WOG...
နီကယ် plating angle အဆို့ရှင်
Chrome ထောင့်အဆို့ရှင် plated
ထောင့်အဆို့ရှင် plating Chrome
အရွယ်အစား: 3/8 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar သို့ WOG...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်ဖိအား: 1000 psi (7.0 mpa) စီးရီး Dringking...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ * 3/8 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
ထောင့်အဆို့ရှင် ပွတ်ထောင့်အဆို့ရှင် ရေတံခါးအဆို့ရှင် ဂိတ်အဆို့ရှင် ကြေးဝါအဆို့ရှင် ပလပ်စတစ်အဆို့ရှင် ဘောလုံးအဆို့ရှင် Thread အတုအဆို့ရှင်